မွေးနေ့အလှူလေးအဖြစ် နေအိမ်တွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင် - Myannewsmedia
မွေးနေ့အလှူလေးအဖြစ် နေအိမ်တွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
By frozePosted on August 12, 2019 August 12, 2019
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်ဘက်တွင်သာမက. အဆိုဘက်မှာလည်းထူးချွန်သူလေးကတော့ မင်းသမီးလေး စန္ဒီမြင့်လွင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီးဒီဟာ အချစ်သီချင်းချိုချိုလေးများ သီဆိုရုံသာမကပဲ Rapping များရွတ်တဲ့ Rapper မလေးတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူးနော်။
ဒီးဒီဟာ မကြာသေးခင်ကလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးရတနာလေး Treasure ကို အောင်မြင်စွာမွေးဖွားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးလေးကတော့ အဖေရော အမေနဲ့ပါ ရုပ်ချင်းဆင်တဲ့အတွက် အားလုံးရဲ့အသည်းကျော်လည်း ဖြစ်လို့နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူမဟာ သမီးလေးကိုမီးဖွားထားတဲ့အတွက် အနုပညာအလုပ်တွေကို ခေတ္တအနားယူထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့လေးကတော့ စန္ဒီမြင့်လွင်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့မွေးနေ့လေးကိုတော့ အိမ်မှာပဲ သံဃာတော်များပင့်ဖိတ်ကာ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆပ်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ” သမီးမွေးနေ့ရောက်တိုင်းအေးချမ်းအောင်မြင်အုတ်ခွက်ဘုရားပင့်နေကျပေမဲ့ဒီတနှစ်ခွင့်ယူထားရတယ်နောက်နှစ်တော့ဆက်ဆက်ပင့်ဖြစ်ပါမယ်ယနေ့
ကန်ဦးဆရာတော်ဘုရားအားဝါဆိုသင်္ကန်းများဆွမ်းခဲဘွယ်ဝတ္ထုများလစဉ်ဆွမ်းများကပ်လှုပါတယ်..” ဆိုပြီး ဒီးဒီမိခင်ရဲ့လူမှုကွန်ယက်တွင် ဝေမျှထားတာဖြစ်လို့ ပရိသတ်ကြီးအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Credit Myanmarload, Photo – Thidar Khin
မှေးနအေ့လှူလေးအဖွဈ သံဃာတျောမြားပငျ့ဖိတျကာအိမျတှငျ ဝါဆိုသင်ျကနျးဆပျကပျလှူဒါနျးခဲ့တဲ့ စန်ဒီမွငျ့လှငျ
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျဘကျတှငျသာမက. အဆိုဘကျမှာလညျးထူးခြှနျသူလေးကတော့ မငျးသမီးလေး စန်ဒီမွငျ့လှငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီးဒီဟာ အခဈြသီခငျြးခြိုခြိုလေးမြား သီဆိုရုံသာမကပဲ Rapping မြားရှတျတဲ့ Rapper မလေးတဈယောကျဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူးနျော။
ဒီးဒီဟာ မကွာသေးခငျကလညျး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးရတနာလေး Treasure ကို အောငျမွငျစှာမှေးဖှားခဲ့တာလညျး ဖွဈပါတယျ။ သမီးလေးကတော့ အဖရေော အမနေဲ့ပါ ရုပျခငျြးဆငျတဲ့အတှကျ အားလုံးရဲ့အသညျးကြျောလညျး ဖွဈလို့နတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ သမီးလေးကိုမီးဖှားထားတဲ့အတှကျ အနုပညာအလုပျတှကေို ခတ်ေတအနားယူထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနလေ့ေးကတော့ စန်ဒီမွငျ့လှငျရဲ့မှေးနရေ့ကျမွတျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့မှေးနလေ့ေးကိုတော့ အိမျမှာပဲ သံဃာတျောမြားပငျ့ဖိတျကာ ဝါဆိုသင်ျကနျးဆပျကပျလှူဒါနျးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ” သမီးမှေးနရေ့ောကျတိုငျးအေးခမျြးအောငျမွငျအုတျခှကျဘုရားပငျ့နကေပြမေဲ့ဒီတနှဈခှငျ့ယူထားရတယျနောကျနှဈတော့ဆကျဆကျပငျ့ဖွဈပါမယျယနေ့
ကနျဦးဆရာတျောဘုရားအားဝါဆိုသင်ျကနျးမြားဆှမျးခဲဘှယျဝတ်ထုမြားလစဉျဆှမျးမြားကပျလှုပါတယျ..” ဆိုပွီး ဒီးဒီမိခငျရဲ့လူမှုကှနျယကျတှငျ ဝမြှေထားတာဖွဈလို့ ပရိသတျကွီးအတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။
Photo – Thidar Khin
Previous post ရေဘေးသင့်ဒေသတွေအတွက် အနုပညာနဲ့ ပေးဆပ်တော့မယ့် နှင်းဆီအဖွဲ့သားများ
Next post ရေဘေးသင့်ဒေသများအတွက် အလိုအပ်ဆုံး ပစ္စည်းတွေကို လှူဒါန်းပေးဖို့ အသိပေးလိုက်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ် ဒေါ်ခိုင်ခိုင်လဲ့